Misy hatrany ny azo atao amin’izao… | NewsMada
Ao anatin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao, mitombo isa ny mpangataka etsy sy eroa. Tsy misy tsy sahirana amin’izao? Misy ny mitalaho mafy amin’izany, mibaiko, manery aza. Toy ny hoe manan-jo sy fahefana amin’izay ananan’ny hafa iny ny sasany. Izay may, adala? Tsy ifanomezan-tsiny fa lalina sy mafy ary sarotra ny fahasahiranana.
Na izany aza, mampieritreritra ihany tokoa ny toe-javatra amin’ny lafiny iray. Misy aloha ny mahantra noho ny ataony toy ny hoe kamo, tsy te hisahirana… Na diso fandeha tamin’ny lalam-piainana: tsy mijery ny farany, za-dratsy miankina amin’ny hafa… Nefa ao koa ny tena mahantra tsy fidiny noho ny antony samihafa: olana amin’ny fianakaviana, asa atao, fiarahamonina…
Manampy trotraka izany rehetra izany izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao. Tsapa sy tsy takona afenina ny fahamaizan’ny sasany hahazo… sitrany ahay. Na efa sarotra ny fahazoana kely noho izay efa iainana sy misy ny rehetra, hany ka tonga amin’ny hoe mitalaho, mibaiko, manery aza. Amin’izay lafiny izay, voka-javatra ny fahantrana fa tsy anton-javatra.
Raha misy ny manankarena amin’ny fomba tsy mazava, be koa ny mahantra tsy amin’ny antony? Efa nisy sy niainana izany ela izay. Amin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina izao, vao mainka miharihary… Tsy miara-misitraka ny soa iombonana sy ny tombontsoa eo anivon’ny firenena, ohatra, ny rehetra. Misy hatrany ny zanak’Ikalahafa, lavitra fitondrana, hadino tanteraka…
Tena misy ny very sy ny tsy fantatra? Toy ny tsy fahalalana mazava ny isan’ny mponina, ohatra, ny trano fonenana, ny asa misy… Ohatra ihany ny mpangataka fa mirongatra be izao ny karazana mahantra ao anatin’izao ady izao. Misy ny mivaro-pananana, manao ny tsy fanao, mikarama vary masaka ara-bakiteny… Tsy misy tsy mikaikaika amin’izao? Nefa misy hatrany ny azo atao… Inona?
“Aza manontany izay mety hataon’ny firenena aminao fa manontania izay azonao atao ho an’ny firenena”, hoy ny filoha teo aloha an’i Etazonia izay, i John Fitzgerald Kennedy.